Home Wararka Dhulkii ay ka baxeen AMISOM iyo CXD oo Al Shabaab la wareegtay
Dhulkii ay ka baxeen AMISOM iyo CXD oo Al Shabaab la wareegtay
Sida ay sheegayan wararka naga soo gaarayo gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku baxeen tuulooyin ku yaala baadiyaha degmada Raaga-ceelle oo laga soo sheegay dhaq-dhaqaaq ay wadaan dagaalameyaasha Al-shabaab. Ciidamada Xooga Dalka ayaa la sheegay ayaa la sheegay in ay baadi goobayaan dagaalamayaashii Al-shabaab ee sida dhuumaaleysiga ku tagay tuulooyinkaas waxaana hada dagan xaalada degmada Raaga-celle.
Guddoomiyaha degmada Raaga-ceelle oo la hadlay warbaahinta t ayaa sheegay in aysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo Al-shabaab amnigana wanaagsanyahay. Dhinaca kale, dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa wali ku sugan tuulooyin ka tirsan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka HirShabeelle. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Jowhar ayaa soo sheegaya in Al-shabaab ay ku suganyihiin tuulooyinka kala ah Warciise, Doondheere iyo Shamiindo.
Dhanka kale Al Shabaab ayaa dhankooda sheegtay in ay si buuxda ula waregeen dhulkii ay ka baxeen ciidamada AMISOM iyo Xooga dalka. Ilaa iyo hada ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay Maamulka HirShabeelle.